Momba anay - Dongguan Kangna Electronic Technology Co., Ltd.
dia iray amin'ireo mpanamboatra PCB malaza any Shina izay manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana PCB, fivoriambe PCB, famolavolana PCB, prototype PCB, sns serivisy fanodinana elektronika.
Ny orinasa dia naorina tamin'ny fiandohan'ny taona 2006 tao amin'ny commuity Shajiao, tanànan'ny Humen, tanànan'i Dongguan, faritanin'i Guangdong. Manarona faritra famokarana ny ozinina
mirefy 10000 metatra toradroa misy 50000 Sq metatra isam-bolana ary manana kapital 8 tapitrisa RMB voasoratra anarana.
Manana mpiasa 800 ny orinasa, ao anatin'izany ny 10% amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana; 12% ny fifehezana kalitao; ary 5% ny ekipa teknolojia matihanina manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny indostrian'ny PCB.
Ny vokatra lehibe ao amin'ny orinasa dia ny 1-40 sosona PCB, ao anatin'izany ny MCPCB (tabilao miorina amin'ny alimo sy alimina), FPC, birao hentitra_flex, PCB henjana, tabilao miorina amin'ny seramika, tabilao HDI, tabilao avo Tg, tabilao varahina mavesatra, birao avo lenta ary fivoriambe PCB . Ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny indostrialy, fitsaboana, fifandraisan-davitra sy indostrian'ny fiara, solosaina, sns.
Afaka manome anao ny prototype fihodinana haingana, batch kely ary vokatra marobe izahay. Azonay tanterahina mora foana ny fitakiana sarotra indrindra aminao. Ny vokatra sy serivisy avo lenta dia hanampy anao hanatsara ny kalitaon'ny vokatrao, hitondra tombony ho anao ary amin'ny farany hampifaninana anao amin'ny tsenanao.
Izahay dia manatanteraka rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra mba hahazoana antoka ny fahamendrehana sy ny fahamarinan-toetran'ny vokatra. Ny vokatray PCB dia zahana amin'ny alàlan'ny fizotran'ny famokarana PCB mba hahazoana antoka fa omena anao ny tabilao fanaovana pirinty avo lenta avo indrindra.
Izahay dia nandalo ny fanamarinana ny UL, ary IATF16949. Mino izahay fa fiainana ny kalitao, ary ny fikatsahana kilema aotra dia tanjonay manara-penitra. Tmampihatra ny filôzôfia momba ny orinasa ny «orinasa manao ny marina, miasa mafy, manara-penitra voalohany, manompo voalohany», manaraka ny kolontsain'ny orinasa tsara indrindra mifototra amin'ny olona, ​​hahatratrarana toe-javatra mandresy fandresena ho an'ny mpiara-miasa sy ny fiaraha-monina.
Te-hihaino anao izahay raha manana fanontaniana na fepetra takiana manokana ianao.
Niorina ao amin'ny SMT Business Unit hanome serivisy fijanonana tokana ho an'ny mpanjifa.
Nanangana ivontoerana fikarohana sy fampandrosoana.
Miomana amin'ny departemanta SMT Business.
Nifindra tany amin'ny toerana vaovao ilay orinasa ary nanampy fitaovana famokarana sy fanandramana vaovao.
Hanitatra 30000 Sq.m isam-bolana ny fahafahan'ny famokarana.
manomboka mampiditra tsipika famokarana MCPCB, mamokatra substrate varahina sy PCB substrate aluminium.
Niorina i KangNa Electronic Technology Co., Ltd.
Ataovy am-pitandremana ny vokatra tsirairay mba hanaovany azy ho Boutique
Raiso am-pahatsorana ny baiko rehetra ary alao antoka fa ho avy ara-potoana
Mahereza miatrika ny fangatahana rehetra, manavao ny fepetra manokana
Tsy mivadika amin'ny mpanjifa rehetra ary manome serivisy mahafa-po